China Otu ogbo nkwụsị mmiri centrifugal ụdị NFPA FM ọkụ mgbapụta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Tongke
Nodị No ： XBC-ES
Ọgwụgwụ mmiri nke nfuli mmiri na-enweta aha ha site n'okporo ụzọ mmiri na-ewe iji banye na mgbapụta ahụ. Elezie mmiri ahụ na-abanye n'otu akụkụ nke impeller, na na njupụta nkwụsị mmiri nfuli, nke a na-egosi ịbanye "njedebe" nke mgbapụta ahụ. N'adịghị ka ụdị ọkpọka ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ na moto ma ọ bụ injin nwere ihe niile, na-ewepu nchegbu gbasara ntụgharị mgbapụta ma ọ bụ nghazi na ime ụlọ. Ebe ọ bụ na mmiri na-abanye n'otu akụkụ nke impeller, ị gaghị enwe ike ịnwe bearings n'akụkụ abụọ nke impeller. Iburu nkwado ga-abụ site na moto ahụ n'onwe ya, ma ọ bụ site na ọkụ ọkụ mgbapụta. Nke a na-egbochi ojiji nke ụdị mgbapụta a na nnukwu mmiri eruba ngwa.
Nchedo Nkwado Ogo
Na-alụbeghị di ogbo Mgbapụta Auru:
Couple Kpọmkwem, àmà vibration na ala mkpọtụ.
Otu uzo nke uzo na uzo.
C&U amị, nke bụ ihe ndị kasị ama ika na China.
Na-eme ka ikuku jụrụ oyi na-eme ka ogologo ndụ dị ogologo.
Obere ntọala chọrọ nke ga-echekwa itinye ego ụlọ site na 40-60%.
Seal Ezigbo akara nke na-enweghị nkwụsị
♦ Kọmpat Ọdịdị, kasị ngwa maka oge a na ụlọ.
A na-eme ka mgbapụta mgbapụta: a na-emepụta ihe na-eme ka a na-ejikọta ya na ọkpọkọ site na nke kachasị elu n'oge a, na-agbanye otu ụzọ. Flanges kwekọrọ na GB4216.5, ma kwadebe ya na Rp1 / 4 ma ọ bụ Rp 3/8 nrụgide nyocha.
A-eller impeller: impeller mechiri emechi, enweghị oke ntụgharị usoro n'okpuru mmiri dị n'okpuru 80 Celsius C na 120 Celsius.
Nhazi pụrụ iche nke mgbanaka akara dị ike nke ọma na-arụ ọrụ nke ọma.
The TONGKE mgbapụta Fire mgbapụta Units, Sistemụ, na Usoro Ejiri Ejiri
TONGKE nrụpụta mgbapụta ọkụ (UL kwadoro, Soro NFPA 20 na CCCF) wepụta nchebe ọkụ dị elu na ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. TONGKE Pump na-enye ọrụ zuru oke, site na enyemaka injinia na nrụpụta ụlọ na mmalite mmalite. Ngwaahịa na-e site a sara mbara nhọrọ nke nfuli, draịva, njikwa, isi efere na ngwa. Nhọrọ mgbapụta na-agụnye nkwụsịtụ ọkụ, ntanetị na nkwụsị nkwụsị nfuli ọkụ ọkụ ọkụ yana nfuli igwe turbine kwụ ọtọ.
Horizontaldị abụọ na nke kwụ ọtọ na-enye ike ruo 5,000 gpm. Sudị nkwụsị nke njedebe na-enye ikike na 2,000 gpm. Nchịkọta n'ime ahịrị nwere ike imepụta 1,500 gpm. Isi sitere na 100 ft ruo 1,600 ft nwere ihe ruru mita 500. Nfuli na-eji igwe eletriki eletriki, injin diesel ma ọ bụ turbines steam. Ngwunye ọkụ ọkụ bụ Ductile nkedo na akwa ọla. TONGKE na-enye akwa akwa na ngwa ndị NFPA 20 tụrụ aro.
Ngwa dị iche na obere, igwe eletriki eletriki eletriki na-arụ ọrụ na mmanụ diesel, nke usoro ejiri. Ezubere ọkọlọtọ iji jikwa mmiri dị mma, mana ihe ndị pụrụ iche dị maka mmiri mmiri na mmiri mmiri pụrụ iche.
Ihe ọkụkụ TONGKE na-enye arụmọrụ dị elu na Agriculture, General Industry, Trade Building, Industry Industry, Protection Fire, Municipal, na Process.
I kpebiela iji belata ọkụ nke ọkụ na-emebi ụlọ ọrụ gị site na ịwụnye UL, ULC edepụtara usoro mgbapụta ọkụ. Mkpebi gị ọzọ bụ usoro ịzụrụ.
Chọrọ mgbapụta ọkụ nke gosipụtara na nrụnye zuru ụwa ọnụ. Emepụtara site n'aka onye ọkachamara nwere ahụmahụ dị ukwuu n'ọhịa nchebe ọkụ. Wantchọrọ ịrụ ọrụ zuru oke iji bido mmalite. Want chọrọ mgbapụta TONGKE.
Inye Ngwọta mgbapụta TONGKE Pụrụ Imezu Gị Chọrọ:
Capabilities Complete na-ụlọ ationgha ike
Capabilities Njikere nnwale na-arụ ọrụ na ngwa ndị ahịa eji akụrụngwa maka ụkpụrụ NFPA niile
● izdị ihu maka ikike na 2,500 gpm
Models ertdị ihu maka ikike 5,000 gpm
Models ●dị ntanetị maka ikike na 1,500 gpm
● modelsdị usoro njedebe maka ikike na 1,500 gpm
Ọkwọ ụgbọala: igwe eletrik ma ọ bụ mmanụ dizel
Ntọala ndị dị mkpa na sistemụ ngwugwu.
Mpempe Mgbapụta Ọkụ & Usoro Ejiri
Enwere ike inye igwe eletriki eletriki na Diesel Engine Drive nfuli ọkụ maka nchikota nke nfuli ọ bụla, draịva, njikwa na ngwa maka edepụtara yana nke akwadoghị na ngwa NON anaghị arụ ọrụ. Ngwunye na sistemụ ngwugwu ejiri ụgwọ akwụ ụgwọ ọkụ ma na-enye ndị a.
Electric Motor mbanye Single ogbo oku mgbapụta
Mbanye Diesel Engine Single ogbo ọkụ mgbapụta
Q. Gịnị na - eme ka mgbapụta ọkụ dị iche na nfuli ndị ọzọ?
A. Nke mbụ, ha na-agbaso ihe siri ike chọrọ NFPA Pamphlet 20, Laboratories Underwriters na Factory Mutual Research Corporation maka ntụkwasị obi na ọrụ na-adịghị ada ada n'okpuru ọnọdụ siri ike ma na-achọsi ike. Eziokwu a naanị kwesịrị ikwu okwu nke ọma maka njirimara ngwaahịa TKFLO na njirimara atụmatụ adịchaghị. Achọrọ nfuli ọkụ iji mepụta ọnụọgụ akọwapụtara (GPM) na nrụgide nke 40 PSI ma ọ bụ karịa. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu na-enye ndụmọdụ na nfuli kwesịrị imepụta ma ọ dịkarịa ala 65% nke nrụgide ahụ na 150% nke akara ngosi ahụ - yana oge niile na-arụ ọrụ na ọnọdụ nkwụgo ụkwụ 15. Omume ịrụ ọrụ ga-abụrịrị isi mechiri emechi, ma ọ bụ "churn," sitere na 101% gaa na 140% nke isi egosipụtara, dabere na nkọwa ụlọ ọrụ nke okwu ahụ. A naghị enye nfuli ọkụ TKFLO maka ọrụ mgbapụta ọkụ belụsọ na ha zutere ihe niile ụlọ ọrụ chọrọ.
E wezụga arụmọrụ njirimara, nfuli ọkụ TKFLO na-eji nlezianya nyochaa ma NFPA na FM maka ntụkwasị obi na ogologo ndụ site na nyocha nke atụmatụ ha na ihe owuwu ha. Iguzosi ike n'ezi ihe, dịka ọmụmaatụ, ga-adabara iguzogide ule hydrostatic nke okpukpu atọ kachasị nrụgide ọrụ na-enweghị ịgbawa! TKFLO si kọmpat na ọma engineered imewe-enye anyị ohere ka afọ ju a nkọwapụta na ọtụtụ nke anyị 410 na 420 ụdị. A ghaghi itinye nghazi injinia maka ibi ndụ, nrụgide mkpọchi, ntụgharị ihu igwe, na nrụgide ịkwa akwa na NFPA. na FM ga-adaba n'ime oke mgbanwe iji hụ na a tụkwasịrị obi kpamkpam. N'ikpeazụ, mgbe emechara ihe niile a chọrọ, mgbapụta ahụ dị njikere maka ule nyocha nke ikpeazụ ka ndị nnọchi anya UL na FM Performance na-agba akaebe ga-achọ ka a gosipụta ọtụtụ mpempe mpempe akwụkwọ nke ọma, gụnyere nke pere mpe na nke kachasị, na ọtụtụ n'ime n'etiti.
Q. Gịnị bụ ahụkarị ụzọ oge maka a ọkụ mgbapụta?
A. leaddị ndu oge na-agba izu 5-8 site na ịhapụ iwu. Kpọọ anyị maka nkọwa.
Q. Kedu ụzọ kachasị mfe iji chọpụta ntụgharị mgbapụta?
A. Maka nkwụnye ọkụ ọkụ ọkụ, ọ bụrụ na ị nọ ọdụ na moto na-eche mgbapụta ọkụ, site na ebe a, mgbapụta dị n'aka nri, ma ọ bụ mara mma, ma ọ bụrụ na mmiri na-abịa site n'aka nri na nkwụsị na-aga n’aka ekpe. Ihe na-abụghị ya bụ eziokwu maka ntụgharị aka ekpe ma ọ bụ imegharị elekere elekere. Isi ihe bụ mgbe anyị na-atụle isiokwu a. Gbaa mbọ hụ na ndị abụọ ahụ na-elele mgbapụta mgbapụta si n’otu akụkụ.
Q. Kedu ka esi arụ injin na akụrụngwa maka nfuli ọkụ?
A. Motors na engines nyere ọkụ ọkụ ọkụ TKFLO dị oke dịka UL, FM na NFPA 20 (2013), ma hazie ya iji rụọ ọrụ n'akụkụ ọ bụla nke ọkụ ọkụ ọkụ na-enweghị gafere ọrụ ọrụ moto, ma ọ bụ nha injin. Ekwela ka ọ ghọgbuo gị na-eche na motọ ndị ahụ ruru naanị 150% nke ikike ntinye aha. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka nfuli ọkụ iji rụọ ọrụ nke ọma karịa 150% nke ikike egosipụtara (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere hydrant na-emeghe ma ọ bụ ọkpọkọ gbajiri agbaji).
Maka nkọwa ndị ọzọ, biko rụtụ aka na NFPA 20 (2013) paragraf 4.7.6, UL-448 paragraf 24.8, na orykpụrụ Nkwado Factlọ Ọrụ nke Onye Mmekọ maka Mgbapụta Ọkụ Split, Klas 1311, paragraf 4.1.2. A na-ahazi motọ na injin ya na nfuli ọkụ TKFLO na ebumnuche nke NFPA 20, UL, na Factory Mutual.
Ebe ọ bụ na a naghị atụ anya na igwe ọkụ ọkụ na-agba ọsọ mgbe niile, a na-ahazi ha ka ha were elele ọrụ 1.15 moto. Ya mere n'adịghị ka mmiri mmiri ụlọ ma ọ bụ ngwa mgbapụta HVAC, igwe mgbapụta ọkụ anaghị adịkarị "enweghị oke" na-agafe usoro ahụ. Ọ bụrụhaala na ị gafereghị ihe ọrụ igwe 1.15, a na-ahapụ ya. Ewezuga nke a bụ mgbe a na-eji ngwa ntụgharị ọsọ ọsọ na-arụ ọrụ igwe eletriki.
Q. Enwere m ike iji akaghị mita ntụgharị dị ka onye nnọchi maka isiokwu nyocha?
A. Mgbaaka nke na-agbapụta mita na-adịkarị mkpa ebe ị na-asọ oke mmiri site na UL Playpipe nozzles adịghị mma; Otú ọ dị, mgbe ị na-eji akwara mita mechiri emechi gburugburu mgbapụta ọkụ, ịnwere ike ịnwale nfuli hydraulic na-arụ ọrụ, mana testing B testingGH testing ịnwale mmiri, nke bụ akụkụ dị egwu nke usoro mgbapụta ọkụ. Ọ bụrụ na enwere mgbochi na mmiri, nke a agaghị apụta ìhè site na mpempe akwụkwọ na-agba ọsọ, mana a ga-ekpughe ya n'ezie site na ịnwale mgbapụta ọkụ na hoses na Playpipes. Na mbido mbụ nke usoro mgbapụta ọkụ, anyị na-ekwusi ike mgbe niile na mmiri na-asọ site na sistemụ iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro ihe niile.
Ọ bụrụ na eweghachite loop na-agbapụta na mmiri - dịka mmiri mmiri dị n'elu - mgbe n'okpuru ndokwa ahụ, ị ​​ga - enwe ike ịnwale ma ọkụ ọkụ ọkụ ma mmiri mmiri. Naanị jide n'aka na a na-edozi mita gị nke ọma.
Q. Achọrọ m ichegbu onwe gị banyere NPSH na ngwa mgbapụta ọkụ?
A. Obere oge. NPSH (isi dị mma nke na-adọrọ adọrọ) ​​bụ ihe dị mkpa na ngwa ndị ọrụ mmepụta ihe, dị ka nri esi mmiri ọkụ ma ọ bụ nfuli mmiri ọkụ. Na nfuli ọkụ, Otú ọ dị, ị na-emeso mmiri oyi, nke na-eji ikuku ikuku niile eme ihe maka uru gị. Mgbapụta ọkụ chọrọ "mmiri idei mmiri," ebe mmiri rutere na mgbapụta mgbapụta site na ike ndọda. I kwesịrị nke a na-ekwe nkwa a mgbapụta praịm 100% nke oge, nke mere na mgbe ị nwere ọkụ, gị mgbapụta na-arụ ọrụ! Ọ ga-ekwe omume ịwụnye mgbapụta ọkụ na valvụ ụkwụ ma ọ bụ ụfọdụ ụzọ aka maka priming, mana enweghị ụzọ isi kwenye 100% na mgbapụta ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma mgbe akpọrọ ka ọ rụọ ọrụ. N'ọtụtụ nkwụsị mgbapụta okpukpu abụọ, ọ na-ewe ihe dịka 3% nke ikuku na mgbapụta mgbapụta iji mee ka mgbapụta ahụ ghara ịrụ ọrụ. Maka nke a, ị gaghị ahụ onye na-emepụta ọkụ ọkụ ọkụ dị njikere ịchụ ihe mgbapụta ọkụ maka nrụnye ọ bụla nke na-anaghị ekwe nkwa "mmiri idei mmiri" na mgbapụta ọkụ oge niile.
Q. Kedu mgbe ị ga-aza ajụjụ ndị ọzọ na ibe a?
A. Anyị ga-agbakwunye ha ka nsogbu bilitere, mana nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na ajụjụ gị!
Nke gara aga: TWP series Mobile Two treys Diesel Engine Drive Vacuum Priming well point dewatering pump
Osote: Gbasaa casing abụọ mmiri ụdị NFPA UL FM ọkụ mgbapụta
TKFLO Vetikal tobaim Fire mgbapụta nkọwa
Ofdị mgbapụta Akwụsị mmiri nfuli nsị nke dabara adaba maka inye mmiri ọkụ usoro nchekwa ọkụ na ụlọ, osisi na yad.
Ike Ihe ruru 2500GPM (567m3 / hr)
Isi Ihe ruru 340feet (104meters)
Nrụgide Ihe ruru 147 Psi (10 n'arọ / cm2, 1014 KPa)
Ike ụlọ Ihe ruru 350HP (260KW)
Ndị ọkwọ ụgbọ ala Igwe eletriki igwe na mmanụ dizel
Lidị mmiri mmiri Mmiri
Okpomọkụ Ihere n'ime oke maka akụrụngwa arụ ọrụ afọ ojuju.
Ihe owuwu Nkedo ígwè, Ọla kọpa
akporo nke ọkọnọ: Engine mbanye ọkụ mgbapụta + akara obubọk + Jockey mgbapụta Eletriki moto mbanye mgbapụta + akara obubọk + Jockey mgbapụta
Ndị ọzọ na-arịọ maka unit biko discuses na TKFLO injinia.
Multistage Fire mgbapụta igwe anaghị agba nchara Materials ...